Dhibaatooyinka nolol xumo ee ka dhashay abaarta Soomaaliya oo sii kordhaysa iyo gargaarkii mucaawimo oo la bilaabay. – Radio Daljir
Dhibaatooyinka nolol xumo ee ka dhashay abaarta Soomaaliya oo sii kordhaysa iyo gargaarkii mucaawimo oo la bilaabay.
Somaliya, July 09 ? Xaaladda nolol xumo ee haysta dadka ku dabaaloobay abaaraha ba?an ee ka jirta meelo badan oo dalka Soomaaliya ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa, iyadoo la tilmaamaya deegaanno kala duwan dad badani in ay ku dhinteen.
Gobollada koonfureed ee Soomaaliya iyo kuwa bartamaha ayaa ah meelaha sida weyn abaartu u saamaysay iyadoo maalin walba magaalooyinka iyo deegaannada biyaha leh lagu soo daad-guraynayo boqolaal qoys oo soo barakacay kaddib markii xoolihii ay haysteen ay ku dhammaadeen abaarta daba-dheeraatay.
In ka badan 50 qof ayaa toddobaaddadii ugu dambeeyey ku dhintay meel kala duwan oo bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya kuwaasi oo u geeriyooday nafaqo-darro iyo macaluul ka dhalatay abaarta iyo roob la?aanta ka dhacday dhul badan oo Soomaaliya ah taasoo ay u sii dheertahay xanuuno iyana soo dugaashaday tabar-darrida dadka.
Boqolaal qof oo kale oo u badan caruur iyo haweenka ayaa iyana la tilmaamayaa hadda in ay u ildaran yihiin macaluul iyo nafaqo-darro, kuwaasi oo qaar ka mid ah lagula tacaalayo xarumaha caafimaadka ee gobolka iyo degmooyinka lagu soo daad-gureeyey dadka barakacay, halka kuwa kalena ay wali jiijiifaan dhirta hoostooda oo aysna nasiib u helin in la soo gaarsiiyo magaalooyinka.
Hay?adaha gar-gaarka ee ku lugta leh Soomaaliya ayaa aad uga dayrinaya xaaladdu meesha ay haatan joogto waxaana ay tilmaamayaa haddii aan si deg deg ah dadkaasi loogu gurmadin, loona gaarsiin gargaaro cunno iyo caafimaad in ay dhici karto dhimasho xad-dhaaf ah.
Meelaha qaar dadka waxaa la gaarsiiyey mucaawimooyin taasoo la tilmaamayo in ay waxuun ka baddashay heerkii nolol xumo, halka meelo kale oo badanna aan la taabsiin illaa iyo haatan wax gar-gaar ah.
Dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa maalmo ka hor fasaxday cunnooyinkii gar-gaar ahaa ee gacanteeda ku jiray si loo taakuleeyo dadka tabaalaysan iyadoo faraha laga saaray guddi wasiirro ah oo dhawaan R/wasaare Gaas uu u magacaabay gurmadka abaaraha.
Dhinaca kale ururka Al-shabaab oo iyana gacanta ku haya deegaanno badan oo koonfurta iyo gobollada dhexe ah ee Soomaaliya ah ayaa ogolaaday in gar-gaar la gaasiiyo dadka ku taabaalaysan deegaannada ay maamulaan taasoo macnaheedu yahay in ay qaadeen xayiraad ay horay u soo rogeen.
Sikastaba ha ahaatee xaaladahaan nolol-xumo ayaa yimid kaddib markii la waayey nur-sannadeedkii tagay iyo midkii ka sii horreeyeyba taasoo dhalisay dhammaanba in ay martaan dhaamamkii biyaha lagu kaydsan jiray, dhulkuna uu xaaluf noqdo.